Global Voices teny Malagasy » Pakistane Miisa Iray Alina, Nihoatra Ny Fefy Nanodidina Ny Trano Fonenan’ny Praiminisitra Mangataka Azy Hametra-pialàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Aogositra 2014 16:01 GMT 1	 · Mpanoratra Faisal Kapadia Nandika Erikah
Sokajy: Azia Atsimo, Pakistana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Mpanao hetsi-panoherana avy amin'ny PTI, tao amin'ny Aabpara Chowk ao Islamabad, ny 16 Aogositra 2014. Sary avy amin'i Asadwarraich. CC BY-SA 4.0
Taorian'ny fihetsiketsehana nandritra ny andro maro, nihoatra tam-pilaminana ny fefy tao amin'ny ‘faritra mena’ tsy azo aleha ao amin'ny renivohitr'i Pakistana , izay ambenan'ny mpitandro ny filaminana sy andiana miaramila ivelan'ny fanjakàna, ireo an'aliny mpanao hetsi-panoherana manohitra ny fanjakana, tarihinà mpanao politika roa miaro ny vahoaka, Imran Khan  sy ny Dokotera Tahirul Qadri .
Ireo mpanao fihetsiketsehana dia hita nanome vonikazo  ireo polisy sy ireo miaramila mpiambina, nahazo baiko ny hitandrina ny fihetsiny manoloana ireo mpanao hetsi-panoherana.
Matetika ireo olona manana alalana handeha ihany no afaka miditra ao amin'ny faritra menan'i Islamabad, izay voatendry ho faritra arovana mafy, manodidina ireo trano lehibe manan-danja an'ny governemanta, tafiditra amin'izany ny sekretariàn'ny praiminisitra.
Ny 19 Aogositra, nanala ireo kôntenera fandefasana entana  nanidy ny faritra mena ireo mpanao hetsi-panoherana, izay misy ireo masoivoho vahiny ao anatin'ny faritra fonenana diplômatikany ihany koa; samy nianiana ny tsy hanosihosy an'io moa ny roa tonta.
Mitarika ny antoko Pakistan Tehrik-e-Insaaf  (PTI) i Imran Khan, mpilalao cricket malaza lasa mpanao politika; ary ny antoko Pakistan Awami Tehreek  (PAT) kosa tarihan'i Tahirul Qadri, Pakistane-Kanadiana Sufi, manam-pahaizana lasa mpanao politika. Samy nilaza izy roa ireo fa nisy hosoka ilay fifidianana solombavambahoaka natao ny May 2013 , izay nahatonga ny antokon'ny praiminisitra ankehitriny Nawaz Sharif ho eo amin'ny fitondrana, taminà fandresena miezinezina. Nanao diabe ho any amin'ny renivohitra izy ireo mba hangataka azy hametra-pialàna.
Tamin'ny voalohany, nandray fepetra hentitra dia hentitra ny governemanta tarihan'ny antoko PML-N an'i Sharif  mba hisakanana ireo antoko roa mpanohitra tsy hanomboka ny diabe mahery vaika manohitra ny fitondràna ho any amin'ny renivohitra, eo ho eo amin'ny 300 kilômetatra miala ny tanànan'i Lahore, ny andro fankalazàna ny fahaleovantenan'i Pakistana, ny 14 Aogositra.
Ny andro voalohandohan'ny fihetsiketsehana, teo amin'ny an'arivony maromaro teo no isan'ireo vahoaka, fa niha-nitombo ho eo amin'ny 100.000 eo izy ireo, araka ireo vinavina sasany.
Tsy nahasakana ireo topanà mpanao fihetsiketsehana maro ireo andrana nataon'ny ao amin'ny fitondrana nametraka kôntenera mba hanakanana ny làlana mankany amin'ilay faritra. Namela ny ankamaroan'ireo vahoaka hiditra tao amin'ny faritra ny mpitandro ny filaminana, ary nisava ireo fiara “tsy mientanentana be loatra “.
Inqilab Martsa – Sary ny alin'ny21 Aogositra #RevolutionWithDrQadri  #Pakistan  #AwamiParliament  pic.twitter.com/dp3bXZS2qg 
Mety niaraka nanosihosy ny faritra mena ireo mpikatroka mafana fo an'ny PAT sy PTI ireo, fa antoko roa samy hafa mihintsy izy ireo any amin'ny fotony. Manoratra izao ao amin'ny bilaogy iray i Shyema Sajjid ao amin'ny gazety an-tsoratra Dawn: 
Nahavita ny tsy vitan'ny antoko politika hafa indray ny PTI (sady tsy nandrahona no tsy nividy vola azy ireo): manangona ireo olona tsy nandray andraikitra ao amin'ny fitondràna teo aloha, ary mitaona azy ireo aminà fitakiana iray, izay tena mety hanafaka antsika aminà governemanta iray tena mpanao kolikoly.
Manara-dalàna tsara ireo PTI, ary manaraka ny tenenin'ny filohany Imran Khan hanao fihetsiketsehana ampitoniana, fa kosa mahery vaika ka mahavita manakodia kôntenera iray na roa, tsy dia nisy fanimbàna fananam-bahoaka loatra (tsy resahana ny hoe azon'izy ireo ny renivohitra amin'izao fotoana izao).
Mandeha eo anilan'ny PTI ilay lehilahy feno hatezerana, i Tahir-ul-Qadri an'ny PAT, ary ireo mpihirany. Samy hafa be amin'ireo mpanohana an'i Khan ireo mpanara-dia azy.
Mipetraka izy ireo rehefa asainy mipetraka ary mitsangana rehefa tiany hitsangana. Raha manodidina ny tsy fanekena ilay voka-pifidianana sy ny kolikoly izay misy idiran'ny PML-N ny anton'ny fihetsiketsehana ataon'i Khan, mihoatra noho izany kosa ny olan'i Qadri.
Roa volana lasa izay, maro tamin'ireo mpanjohy an'i TuQ no namoy ny ainy tamin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana teo ivelan'ny trano fonenany tany Lahore. Nisy vehivavy sy ankizy tao anatin'ireo maty. Efa nanaovana hetsi-panoherana mafy io loza nitranga io tao an-toerana sy tany amin'ny firenena hafa maro, tokony efa antony ampy tsara io ho an'ireo mpikambana ao amin'ny faritra, raha tsy federaly mihintsy, na ny governemanta, mba hametra-pialàna.
Hita be ny fahasamihafàn'ny fanambaràn'ny mpitarika tsirairay. Nibitsika miharo fihaikàna i Khan hoe:
“Rehefa lasa lalàna ny fanaovana ny tsy rariny, lasa adidy ny fanoherana.” Omaly, nanao dingana lehibe isika ho an'ny Pakistana Vaovao sy ny fahalalahana (demokrasia) isika..
Raha nitaky ny fahefana ho azy mihintsy kosa ny Dr. Tahir-ul-Qadri , nitatitra i Murtuza Ali Shah, mpanao gazety any Londres, ho an'ireo fampahalalam-baovao Pakistane maro hoe :
Nilaza ny Dr Tahir-ul-Qadri fa tsy hamela ny praiminisitra Pakistane hivoaka velona ny parlemanta izy raha tsy mametra-pialàna io ary mamindra ny fahefana aminy — Murtaza Ali Shah (@MurtazaGeoNews)
Ireo mpitolona eo amin'ny Hyderabad Bypass, Hyderabad, Pakistana, manao fitorevahana ho fanohanana ny (fitakiam-piovàna) fitorevahana “inqalab” an'ny Islamabad. Sary avy tamin'i Rajput Yasir. Fizakàmanana Demotix (19/8/2014)
Mivoaka amin'ny fahanginana ny tafika
Nandritra izany, nivoaka tamin'ny fahanginany mikasika ireo hetsi-panoherana ny tafika nony farany, izay andrim-panjakàna matanjaka indrindra ao Pakistana. Ny miaramila, izay nifehy an'i Pakistana nandritra ny antsasaky ny fiainany, dia niezaka mafy ny hanalavitra ny resaka politika hatramin'ny nametrahan'ny Jeneraly Musharraf ny fialàny tamin'ny maha filoham-pirenena azy ny taona 2008.
Taorian'ny nanitsahan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny faritra mena, nangatahan'ny  tafika ny hisian'ny fifampiresahana teo amin'ny fitondrana sy ireo roa tonta mpanao hetsi-panoherana. Nihaona tamin'ny filohan'ny PTI  ny kaomity namboarin'ny governemanta, ny PTI izay efa nanao fangatahana niisa enina, ny fialàn'ny praiminisitra no voalohany. Niato ny Alakamisy teo ny fifampiresahana.
Anatin'izany tsy fahitan-kevitra izany, manahy ny mety hisian'ny fangalan'ny tafika an-keriny ny fitondrana ny sasany. Raha araka ny fampitahàna amin'ireo hetsika telo lehibe nisy teo amin'ny tantaran'i Pakistana, nihevitra i Tahir Mehdi  ao amin'ny Dawn fa tsy hisy mihintsy ny fakàna an-keriny ny fitondrana.
Nanamarika ny tena aty lalin'ny demokrasia any anatin'ireo hetsi-panoherana ilay mpanao gazety malaza Hamid Mir:
Na tiana na tsy tiana, izay ny maha samy hafa ny demokrasia sy ny jadona, tsy nanaiky na oviana na oviana ny hanaovana fihetsiketseham-bahoaka eo anoloan'ny parlemanta mihitsy i Musharraf — Hamid Mir (@HamidMirGEO)
Manosika ilay fihetsiketsehana ho an'ny fanovàna ny media
Hita mivandravandra amin'ireo fandrakofam-baovao momba ireo hetsi-panoherana alefan'ireo fantsona mpampahalala vaovao ao an-toerana any Pakistana ny kolontsain'ny media manao hoe “izaho no voalohany namoaka ny vaovao”. Matetika no mifantoka amin'ny hoe inona no mety hitranga ireo mpamoaka vaovao, noho ny hoe inona ny zava-mitranga.
Nanamafy tamin'ny gazety Dawn i Adnan Rehmat, mpanao gazety no sady mpamakafaka politika, fa be loatra tsy mifandanja amin'ny tokony ho izy ny fandrakofam-baovao ataon'ny media  omena ireo roa mpanao politika mpitarika ao ambadik'ilay fihetsiketsehana:
“Mety manana mpanaraka aman'hetsiny i Qadri, kanefa tsy mpandray anjara tao amin'ny fifidianana ny antokony, noho izany, tsy rariny loatra ny fandrakofana be loatra taon'ny media miresaka ny fitakiany,” hoy izy, nampiany hoe: “Azoazo kokoa ny fanehoana ny fangatahan'i Imran amin'io resaka io, kanefa raha jerena hoe vato kely eo amin'ny 20 % eo ihany no azon'ny antokony tamin'ny fifidianana 2013, lasa mampisalasala ihany ny momba ny media amin'ny fanomezany toerana lehibe azy eo amin'ny fandrakofam-baovao nefa manao ankilabao ny fomba fijery sy ny fanehoan-kevitr'ireo mpifidy 75 % avy amin'ireo antoko hafa.”
Ao amin'ny gazety The Express Tribune, nilaza i Chris Cork  fa nanodina ny tena zava-misy marina eo amin'ilay fihetsiketsehana ny firesahana mihoampampana loatra ataon'ireo media:
Raha jerena ireo media nandritra izay herinandro faramparany izay, indrindra fa ireo media elektrônika, tsy sarotra ny mandresy lahatra ny tena fa mitady fihetsiketsehana mitondra fanovàna i Pakistana. Tsy izy anefa io. Latsaky ny 60.000 ankehitriny ireo vahoaka maka toerana eo amin'ny ‘Constitution Avenue’ (Làlan'ny Lalam-panorenana) , miaraka amin'ireo fitakiana izay tsy mitsaha-mitombo sy miha-sarotra foana ataon'ireo mpitarika azy, izay tsy fantatra intsony hoe inona ny ao an-tsainy ao ambadik'izany. Tsy fihetsiketsehana mitondra fanovàna izany. Tsy isalasalàna fa fanehoana tsy fahafaliam-po io, ary mety maneho ny eritreritra sy ny zavatra tsapan'ny maro ireo mpanao hetsi-panoherana ireo, fa tsy fihetsiketsehana fitakiana fanovàna io.
Nandritra izany, nanombaka indray koa ny fihetsiketsehana hafa iray ataon'ny PTI eo amin'ny toerana manan-tantara Teen Talwar , ao amin'ny tananan'i Karashi.
Efa ho herinandro no nipetrahan'ireo mpanao hetsi-panoherana ireo tao amin'ny renivohitra. Tokony mijery vahaolana haingana ny governemanta mba tsy hahatongavana amin'ny fahapotehana tanteraka, eo mantsy ny fanaporetana misonga hatrany, avy amin'ireo mpivarotra ao an-toerana, izay miatrika fahasahiranana ara-toekarena noho ny fangejana ny renivohitra, ary koa ireo mponin'i Islamabad izay mihitsoka amin'ny fitohanan'ny fitaterana noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/08/31/63345/
 nihoatra tam-pilaminana ny fefy tao amin'ny ‘faritra mena’ tsy azo aleha ao amin'ny renivohitr'i Pakistana: http://www.samaa.tv/notes/21-Aug-2014/live-updates-azadi-march-and-inqilaab-march-hog-red-zone
 Dokotera Tahirul Qadri: http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Tahir-ul-Qadri
 hita nanome vonikazo: http://www.dailymotion.com/video/x242gfp_pti-women-workers-throw-petal-on-policemen-in-red-zone_tv
 nanala ireo kôntenera fandefasana entana: https://au.news.yahoo.com/a/24756294/pakistan-anti-government-protesters-march-on-parliament/
 nisy hosoka ilay fifidianana solombavambahoaka natao ny May 2013: http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistani_general_election,_2013
 antoko PML-N an'i Sharif: https://globalvoicesonline.org/2014/08/14/islamabad-on-lockdown-as-politicians-launch-anti-government-marches-on-pakistans-independence-day/
 tsy mientanentana be loatra: http://www.dawn.com/news/1126955/crackdown-blockade-fail-to-dampen-spirits
 Manoratra izao ao amin'ny bilaogy iray i Shyema Sajjid ao amin'ny gazety an-tsoratra Dawn:: http://www.dawn.com/news/1126582/azadi-is-here-but-what-does-that-mean
 Nihaona tamin'ny filohan'ny PTI: http://indianexpress.com/article/world/asia/pakistan-govt-negotiators-to-meet-protest-leaders-for-second-day/
 Niato : http://www.dawn.com/news/1126932/govt-pti-back-to-square-one
 fandrakofam-baovao ataon'ny media: http://www.dawn.com/news/1126586/of-wet-shalwars-and-televised-revolutions
 maka toerana eo amin'ny ‘Constitution Avenue’ (Làlan'ny Lalam-panorenana): http://tribune.com.pk/story/751391/a-weary-state/tribune.com.pk/azadimarch/
 Teen Talwar: http://en.wikipedia.org/wiki/Teen_Talwar
 fitohanan'ny fitaterana : http://dailythepatriot.com/citizens-losing-patience-as-life-in-islamabad-paralyzed/